Khabar Nirantar | » चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनायो ? चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनायो ? – Khabar Nirantar
चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनायो ?
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत समस्या कुटनीतिक वार्ता नै समाधान हुने बताउनभुएको छ । भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वार्ताकाे लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो ।